UmGangatho wesi-6 weGalofu: Umdlali (ukusuka kwimimiselo esemthethweni yeGalofu)
(Imithetho esemthethweni yeGalufa ibonakala apha nge-USGA, iyalisebenzisa kunye nemvume, kwaye iyakubhaliswa ngaphandle kwemvume ye-USGA.)
Umdlali kunye no- caddy bakhe banembopheleleko yokwazi iMithetho. Ngethuba lokujikeleza elikhankanywe , ngenxa yokuphulwa komthetho ngu-caddy wakhe, umdlali wenza isihlomelo esifanelekileyo.
a. Umdlalo woMdlalo
Ngaphambi kokuqala umdlalo kumncintiswano wobunzima, abadlali kufuneka baqaphele omnye komnye ukukhubazeka kwabo.
Ukuba umdlali uqala umdlalo obhengeze ukhubaze ngaphezu kwelokuba unelungelo kwaye oku kuchaphazela inani lezibetho ezinikwe okanye ezifunyenweyo, akavumelekanga ; ngenye indlela, umdlali kufuneka adlale ukukhubazeka.
Kukho nawuphi na umjikelo womncintiswano wokukhuseleka, ukhuphiswano kufuneka liqinisekise ukuba ukhubazekile kubhalwa kwikhadi lakhe lamanani ngaphambi kokuba kubuyiselwe kwiKomiti . Ukuba akukho mkhuhlane ubhalwe kwikhadi lakhe lamanqaku ngaphambi kokubuyiselwa (Umthetho 6-6b), okanye ukuba ubungozi oburekhodiweyo buphakamileyo kunokuba unelungelo kwaye oku kuyachaphazela inani lemivimbo efunyenweyo, akavumelekanga kumncintiswano wobunzima ; Ngenye indlela, amanqaku amele.
Qaphela: Ngulo xanduva lomdlali ukwazi imingxuma apho imivimbo yokukhubazeka iyakunikwa okanye ifunyenwe.
6-3. Ixesha lokuQala kunye namaqela
a. Ixesha lokuQala
Umdlali kufuneka aqale ngexesha elimiselwe yiKomiti.
I-PENALTY FOR MORE OF RULE 6-3a:
Ukuba umdlali ufika kwindawo yakhe yokuqala, ukulungele ukudlala, emva kwemizuzu emihlanu emva kokuqala kwakhe, isihlwayo sokungaphumeleli ukuqala ngexesha kukulahlekelwa ngumdlalo wokuqala kumdlalo okanye imivimbo emibili kwindawo yokuqala yokudlala. Ngaphandle koko, isohlwayo sokuphulwa kwale Mithetho ayivumelekanga.
UBogey kunye nemincintiswano - Jonga iNqaku 2 ukuya kwiMithetho 32-1a .
Imincintiswano yaseStableford - Qaphela iNqaku 2 ukuya kwiMithetho 32-1b .
Ngaphandle: apho iKomiti inquma ukuba iimeko ezizodwa zithintele umdlali ukuba aqale ngexesha, akukho sihlwayo.
Ngomdlalo wokubetha, umqhubi kufuneka ahlale kulo lonke iqela elihlelwe yiKomidi, ngaphandle kokuba iKomidi igunyaze okanye ivumelise utshintsho.
I-PENALTY FOR KUNYE UKUPHATHWA KOMTHETHO 6-3b:
(Ibhola eliphambili kunye nebhola lebhola ezine-jonga iMigaqo 30-3a no- 31-2 )
Umdlali unokuncedwa ngumdlali, kodwa ulinganiselwe kumntu omnye kuphela ngexesha elinye.
* INDLELA YOKUPHATHWA KOMTHETHO 6-4:
Ukudlala umdlalo - Ekugqibeleni umgobo apho ulwaphulo lufunyanwa khona, umgangatho womdlalo uhlengahlengiswa ngokutsala umgodi omnye kwisango ngasinye apho kwenzeka ukuphulwa; Ukuncitshiswa okukhulu kwienxa zonke - Izimbobo ezimbini.
Umdlalo we-stroke - Izibetho ezimbini kwimiba nganye apho kukho ukuphulwa; isigwebo esiphezulu ngasinye ngeenxa zonke - izibetho ezine (iimbetho ezimbini kwiintlobo ezimbini zokuqala apho kukho ukuphulwa).
Ukudlala umdlalo okanye umdlalo wokubetha - Ukuba ulwaphulo lufunyaniswa phakathi komdlalo weemingxuma ezimbini, kuthathwa ngokuba sele kufunyenwe ngexesha lokudlala kwimiba elandelayo, kwaye isilathiso kufuneka sisetyenziswe ngokufanelekileyo.
UBogey kunye nemincintiswano - Qaphela Inqaku 1 ukuya kwi- Rule 32-1a .
Imincintiswano yaseStableford - Qaphela iNqaku 1 ukuya kwi- Rule 32-1b .
* Umdlali onamalungu angaphezu kweyodwa ephula umthetho lo Mthetho kufuneka ukuba ngokukhawuleza ekufumaneni ukuba ukuphulwa kuye kwenzeke ukuqinisekisa ukuba akanalo elinye i-caddy nganoma nayiphi na ixesha ngexesha lesisele kwinqanaba elichaziweyo. Ngaphandle koko, umdlali akavumelekanga.
Qaphela: IKomiti inokuthi, ngokwemiqathango yokhuphiswano ( uMthetho wama-33-1 ), iyakwenqabela ukusebenzisa ama-caddies okanye ukukhawulela umdlali ngokukhetha kwakhe i-caddy.
Umthwalo wokudlala ibhola elifanelekileyo uhlala nomdlali. Umdlali ngamnye kufuneka abeke uphawu lokuchonga kwibhola.
6-6. Ukufakwa kwiStroke Play
a. Ukurekhoda izikolo
Emva kwendawo nganye umakishi makaqwalasele amanqaku kunye nomncintiswano kwaye urekhode. Ekupheliseni umjikelo umakishi kufuneka asayine ikariti yamanqaku aze ayinike umncintiswano. Ukuba amanqaku angaphezu kweyodwa abhala amanqaku, ngamnye kufuneka asayine inxalenye enoxanduva lwakhe.
b. Ukutyikitya kunye neKhadi lokuBala kwakhona
Emva kokugqitywa kwinqanaba, umncintiswano kufuneka ahlole amanqaku kwinqanaba ngalinye aze ahlawule nayiphi na into engathandabuzekiyo neKomiti. Kumele aqinisekise ukuba umakishi okanye abamakishi baye basayina ikhadi lekhadi, batyikitye ikhadi yamanqaku baze babuyisele kwikomiti ngokukhawuleza.
INKQUBO YOKUPHATHWA KOMTHETHO 6-6b:
c. Ukuguqulwa kwePart Card
Akukho tshintsho lwenziwa kwikhadi lekhadi emva kokuba umncintiswano ulibuyisele kwikomiti.
d. I-Score engalunganga yeHole
Umncintiswano unoxanduva lokuchaneka kwamanqaku abhalwe kwiziko ngalinye kwikhadi lakhe lamanqaku. Ukuba ubuyisela amanqaku kuyo nayiphi na into engaphantsi kunokuba ithathwe, ayivumelekanga . Ukuba ubuyisela amanqaku kunoma yimuphi umgodi ophakamileyo kunokuba uthathwe ngokwenene, amanqaku abuyele.
Ukungabikho komsebenzi: Ukuba umncintiswano ubuyisela amanqaku kuwo nayiphi na indawo engezantsi kunokuba yenziwe ngenxa yokungaphumeleli ukufaka imivimbo yesigwebo esithile, ngaphambi kokuba abuyisele ekhadini lakhe lemali, engazange azibonele, akavumelekanga. Kwiimeko ezinjalo, ukhuphiswano lubangela isihlomelo esichazwe nguMthetho osebenzayo kunye nesohlwayo esongezelelweyo semivalo emibili kwimiba nganye apho umqhubi wenza umyalelo woMthetho woMgaqo-6-6 . Oku kukhangekanga akusebenzi xa isohlwayo esifanelekileyo singakufanelekanga kumncintiswano.
Qaphela 1: IKomiti ijongene nokongezwa kwamanqaku kunye nesicelo sabakhubazekile esibhalwe kwikhadi lekhadi - bona uMthetho wama-33-5 .
Qaphela 2: Kwibala lokudlala kwesibhola sesine , bona iMigaqo 31-3 no- 31-7a .
6-7. Ukulahla okungafunekiyo; Ukudlala kancane
Umdlali kufuneka adlale ngaphandle kokulibaziseka ngokungalinganiyo kwaye ngokuhambelana naluphi na umzila wemihlahlandlela yokudlala eyenziwa yiKomidi. Phakathi kokugqitywa kombhobho kunye nokudlala kumhlaba olandelayo we- teeing , umdlali makangalibaleli ngokukhawuleza umdlalo.
INKQUBO YOKUPHATHWA KOMTHETHO 6-7:
Ukudlala umdlalo - Ukulahlekelwa kwemingxuma; Ukudlala kwesithintelo - Imivimbo emibili.
Imincintiswano yaseStableford - Qaphela iNqaku 2 ukuya kuMgaqo 32-1b .
Isohlwayo esilandelayo - Ukungavumelekanga.
Qaphela 1: Ukuba umdlali ukhawuleza ukudlala phakathi kweemingxuma, uyalibazisa umdlalo wecala elilandelayo kwaye, ngaphandle kwe-bogey, kunye ne-Stableford imincintiswano (jonga umgaqo-32 ), isohlwayo siyasebenza kuloo mgobo.
Qaphela 2: Ngenjongo yokuthintela ukudlala ngokukhawuleza, iKomidi inokuthi, ngokwemiqathango yokhuphiswano ( iMigangatho 33-1 ), yenze iinqanaba lezikhokelo zokudlala ezibandakanya ixesha elide elivunyelwe ukuzalisa umjikelezo ochaziweyo, umgodi okanye isifo .
Kwimidlalo yokufanisa, iKomiti inokuthi, kwimeko enjalo, iguqula isohlwayo sokuphulwa kwalo Mthetho ngale ndlela:
Icala lokuqala - Ukulahlekelwa kwemingxuma;
Icala lesibini - Ukulahlekelwa kwendawo;
Ngomdlalo wokubetha, iKomiti inokuthi, kwimeko enjalo, iguqula isohlwayo ngokuphula umthetho lo Mthetho ngale ndlela:
Icala lokuqala - I-stroke enye;
Icala lesibini - imivimbo emibili;
6-8. Ukuyeka ukudlala; Ukuqalisa ukudlala
a. Xa kuvunyelwe
Umdlali akufanele acime umdlalo ngaphandle kokuba:
(i) IKomiti inqamle umdlalo;
(ii) ukholelwa ukuba kukho ingozi kumbane;
(iii) ufuna isigqibo esivela kwiKomidi kwinqanaba elingathandabuzekiyo okanye eliphikisanayo (jonga iMigaqo 2-5 no-34-3); okanye
(iv) kukho esinye isizathu esifanelekileyo sokugula ngokukhawuleza.
Imozulu engalunganga ayikho yeso sizathu esihle sokuyeka ukudlala.
Ukuba umdlali unqanda ukudlala ngaphandle kwemvume ethile evela kwiKomidi, kufuneka axele ingxelo kwiKomidi ngokukhawuleza. Ukuba wenza njalo kwaye iKomiti ibona isizathu sakhe esanelisayo, akukho sihlwayo. Ngaphandle koko, umdlali akavumelekanga .
Ukungabikho komdlalo wokudlala: Abadlali abayekanga umdlalo ngokukhawulelana ngesivumelwano abazithobeli ukungafaneleka, ngaphandle kokuba ngokwenza oko ukhuphiswano lulibazisekile.
Qaphela: Ukushiya ikhosi kungekhona ngokwayo kubangela ukuyeka ukudlala.
b. Inkqubo Xa kudlalwa Ukumiswa yiKomiti
Xa umdlalo ugxininiswa yiKomiti, ukuba abadlali kumdlalo okanye iqela baphakathi komdlalo weemingxuma ezimbini, akufanele baphinde baphinde badlale kuze kube yilapho iKomiti inqume ukuqala kwakhona komdlalo. Ukuba baye baqala ukudlala emngxeni, banokuyeka ukudlala ngokukhawuleza okanye baqhubeke nokudlala komngxuma, xa benjenjalo ngaphandle kokulibala. Ukuba abadlali bakhetha ukuqhubeka bedlala umdlalo, bavumelekile ukuba bayeke ukudlala ngaphambi kokuba bawugqibe. Kwimeko nayiphi na into, umdlalo kufuneka unqunywe emva kokuba umgca ugqityiwe.
Abadlali kufuneka baqalise ukudlala xa iKomiti inqume ukuqhutshwa komdlalo.
INKQUBO YOKUPHATHA UKUPHATHWA KOMTHETHO 6-8b:
Qaphela: IKomiti inokubonelela, ngokwemiqathango yokhuphiswano ( uMthetho wama-33-1 ), ukuba kwiimeko ezinobungozi zidlala kufuneka zipheliswe ngokukhawuleza emva kokumiswa komdlalo yiKomiti.
Ukuba umdlali uhluleka ukuyeka ukudlala ngokukhawuleza, akavumelekanga , ngaphandle kokuba iimeko zivuma ukuba zihlawulwe njengoko kuhlinzekwe kuMgaqo 33-7 .
c. Ukuphakamisa ibhola xa umdlalo ushiywa
Xa umdlali eyeka ukudlala komngxube phantsi kweNqununu 6-8a, unokuphakamisa ibhola yakhe, ngaphandle kwesihlwayo, kuphela xa iKomiti inqamle umdlalo okanye kukho isizathu esihle sokuyiphakamisa. Ngaphambi kokuba uphakamise ibhola umdlali makabeke uphawu lwalo. Ukuba umdlali unqanda ukudlala kwaye uphakamisa ibhola yakhe ngaphandle kwemvume ethile evela kwiKomidi, kufuneka, xa ebika iKomiti (Umthetho 6-8a), ingxelo ingxelo yokuphakamisa ibhola.
Ukuba umdlali uphakamisa ibhola ngaphandle kwesizathu esihle sokwenza njalo, akwazi ukuphawula indawo yebhola ngaphambi kokuyiphakamisa okanye engaphumeleli ukubika ukuphakanyiswa kwebhola, ubeka isohlwayo sesifo esisodwa .
d. Inkqubo xa Udlala kwakhona
Ukudlala kufuneka kuphinde kuqalwe ukusuka apho kuphelile khona, nangona ukuqala kwakhona kwenzeka ngosuku olulandelayo. Umdlali kufuneka, mhlawumbi ngaphambi okanye xa umdlalo uphinde uqaliswe, qhubeka ngokulandelayo:
(i) ukuba umdlali uphakamise ibhola, kufuneka, xa enelungelo lokuliphakamisa phantsi komthetho 6-8c, faka ibhola yokuqala okanye ibhola echitshiweyo kwindawo apho ibhola langaphambili liphakanyisiwe. Ngaphandle koko, ibhola yokuqala kufuneka ithatyathwe endaweni;
(ii) ukuba umdlali akayiphakamisanga ibhola, unokuthi, xa enelungelo lokuliphakamisa phantsi komthetho 6-8c, pha kamisa, uhlambulule kwaye utshintshe ibhola, okanye ufake indawo ibhola, kwindawo apho ibhola yokuqala ziphakanyisiwe. Ngaphambi kokuphakamisa ibhola kufuneka aphawule indawo yayo; okanye
(iii) ukuba ibhola lomdlali okanye umakishi webhola uhanjiswe (kubandakanywa ngumoya okanye amanzi) ngelixa umdlalo uphelile, ibhola okanye umakishi webhola kufuneka kufakwe kwindawo apho ibhola lokuqala okanye ibhalisi yebhola lihanjisiwe.
Qaphela: Ukuba indawo apho ibhola iya kufakwa khona akunakwenzeka ukuqikelela, kufuneka kucatshangwe kwaye ibhola ibeke kwindawo eqikelelwayo. Amalungiselelo oMgaqo 20-3c ayisebenzi.
* INDLELA YOKUPHATHWA KOMTHETHO 6-8d:
* Ukuba umdlali ubeka isohlwayo esipheleleyo sokuphula umthetho we-6-8d, akukho sihlwayo esongezelelweyo phantsi koMthetho 6-8c.
(Inqaku lomhleli: Iinqunto zomgaqo-6 zingabonwa kwi-usga.org. Imigaqo yeGalofu kunye neZigqibo kwiMithetho yeGalufa nayo iyajongwa kwiwebhusayithi ye-R & A, i-randa.org.)
Buyela kwiMigaqo yeGolati Index
Indlela yokuHlaba kunye neenyawo zombini kwi-Skateboard
Uhlobo luni lwe Bowler Ngaba wena?
Indlela yokuhlawula iParaglider ngokugqibeleleyo, rhoqo ixesha
Umkhondo kunye neNgqungquthela yoMqalo: Ukufunda iJump Long
Yiyiphi 'iNdiza' kwiKhenketho yeGolf?
Akukho Masculine okanye Umfazi
UJack White Ufumana Igalelo le-Solo Grammy yokuqala kwaye ulwa neGuamamole Recipe Leak
5 Abalobi be-Harlem Renaissance
Corsi, FenClose kunye ne-PDO
Okubuhlungu kunye nokutshabalalisa iNorth American Wildfires - 1950 ukuya Kule